Mpanondrana vehivavy mpivarotena any Sri Lanka: Sinoa roa lahy sy vehivavy gasy iray voasambotra | NewsMada
Natolotra ny fampanoavana, ny alatsinainy teo, ary samy efa naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora ireo teratany sinoa roa lahy sy vehivavy gasy iray, mpanondrana vehivavy gasy hivaro-tena any Sri-Lanka. 200 hatramin’ny 500 dolara no sandan’ny fivarotan-tenan’ny vehivavy iray.
Voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny “enquête spécialisée”, ny zoma teo teny Behoririka ny Sinoa roa lahy sy vehivavy gasy voarohirohy amin’ny fanondranana olona hivaro-tena any Sri Lanka. Raha ny fanazavana nomen’ny polisy, ny alakamisy 9 janoary 2020 lasa teo, nisy tovovavy iray teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato saika hiondrana ho any Sri Lanka. Nampiahiahy ny polisy miasa eo amin’ny seranam-piaramanidina anefa ny fihetsik’ity tovovavy ity ka nosamborina avy hatrany izy, nomena ny polisy avy ao amin’ny “enquête spécialisée” mba hanaovana fanadihadiana. Nandritra ny fanadihadian’ny polisy no nahafantarana fa saika handeha hivaro-tena any Sri Lanka ity tovovavy ity ka tamin’ny alalan’ny tambajotran-tserasera “facebook” no nahitany ilay asa, araka ny filazany tamin’ny polisy. Nanohy ny famotorana sy ny fanadihadiana hatrany ny polisy, fantatra tamin’izany fa ramatoa iray 35 taona no mpitady ireo vehivavy gasy hiasa any Sri Lanka miaraka amina sinoa roa lahy. “Avy any amin’ny faritany ity tovovavy saika hiondrana ity no nahita ilay tolotrasa tao anaty tambajotra facebook ka niakatra teto Antananarivo ary nihaona tamin’ilay ramatoa”, hoy ny fanazavan’ny polisy.
500 dolara (2 tapitrisa Ar latsaka kely) ny fivarotantena any…
Rehefa tafahaona tamin’ilay ramatoa ilay tovovavy dia nentiny avy hatrany nankany amin’ireo Sinoa roa lahy izay mampitady vehivavy gasy hivaro-tena ho any Sri Lanka. Nohamafisin’ny polisy fa ireto Sinoa roa lahy ireto no nampiantrano ilay tovovavy tao aminy ary handefa azy ho any Sri Lanka. Nandritra ny famotorana nataon’ny polisy no nahafantarana fa eny Behoririka no mipetraka ireto Sinoa ireto ka ny zoma 10 janoary 2020 no tratra tao an-trano ny iray raha tratra niaraka tamin’ilay ramatoa teny Analakely kosa ilay faharo. Nilaza ireto Sinoa ireto, nandritra ny famotorana nataon’ny polisy, fa efa misy hotely vonona hivantanan’ilay tovovavy any Sri Lanka rehefa tonga any izy ary efa misy trano fiasana ihany koa momba ity fivarotantena ity. Mahakasika ny fomba fiasa any Sri Lanka indray dia atao anaty “album photos” ireny ny sariny hampisehoana ireo mpanjifa. Nambaran’ireo Sinoa, nandritra ny famotoran’ny polisy, fa manodidina ny 200 hatramin’ny 500 dolara (2 tapitrisa Ar latsaka kely eo ho eo raha avadika vola malagasy) ny vidin’ny fivarotantena hataony.
Ekena fa sarotra sy mafy ny fiainana amin’izao fotoana izao, eo koa ny olana amin’ny fahasarotan’ny fitadiavana asa eto Madagasikara, saingy tsy mety fay ihany (tsy sanatria akory mandatsa) itony tovovavy mikasa hiondrana an-tsokosoko any ivelany itony. Ireny niaraha-nahita ireny ny zava-nanjo ireo vehivavy malagasy niasa tany amin’ny tany Arabo ka nahatonga ny filoha Rajoelina nanapa-kevitra haingana nandefa fiaramanidina nampody azy ireo eto an-tanindrazana. Tokony hojeren’ny tompon’andraikitra ny momba ny fanomezana asa eto amintsika mba hialana amin’ny toy izao. Ahoana ihany koa ny momba itony mpanao trafika sy/na mpisera vehivavy halefa hiasa na hivaro-tena any ivelany itony?